Mabhuku Akanakisa Asinga zivikanwe | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku akanakisa asiri echokwadi
Alberto Makumbo | | Bvunzo, Vanyori, Type, Literature
Tinoda kufungidzira, asi chokwadi chinogara chichiuya kuzotidzosera pasi, pane imwe nguva. Munyika yetsamba umo fungidziro inoita senge inotungamira kati kupinda mumvura, tinozvirangarira izvi akanakisa asiri emanyepo mabhuku kuitira kuti unzwisise zvirinani magiya emweya uye nhoroondo yeaya madiki ma microunivers.
1 Mabhuku akanakisa asiri echokwadi
1.1 Imba Yako Iwe, naVirginia Woolf
1.2 Nyaya yekurasa, naGabriel García Márquez
1.3 Ana Frank dhayari
1.4 Kufungisisa, naMarco Aurelio
1.5 Mufananidzo we Africa, naChinua Achebe
1.6 Saka Spoke Zarathustra, naFriedrich Nietzsche
1.7 Unyanzvi hweHondo, naSun Tzu
1.8 Tsamba kune mudiki munyori wenhau, naMario Vargas Llosa
1.9 De Profundis, naOscar Wilde
Makore masere mushure vakadzi vakapihwa mvumo yekuvhota, Woolf akapihwa muna 1929 mukana wekupa hurukuro dzakasiyana parusununguko rwevakadzi. Nzira yakanakisa yekuita izvi zvakawanikwa nemunyori weChirungu yaive kuburikidza neA Kamuri Yangu Ndoga, chinyorwa mukati rusununguko rwevakadzi mune zveupfumi kana zvasvika pakukwanisa kukura seartist. Kubva pane yakajeka vhezheni yekuona uye kwete pasina irony, munyori weAl Faro akavaka chiratidzo cheushingi wechikadzi kwenguva iyo iyo pink shanduko yaityisa asi yakatsunga.
Nyaya yekurasa, naGabriel García Márquez
Gabo acharangarirwa nebasa rake semunyori wenhema, kunyange hazvo izvo zvisingadzikise kugona kwake kwekutapa nhau kana zvasvika pakubata nenyaya senge tirikubata pano. Rakadhindwa muna 1959 kubva kunzvimbo dzakasiyana dzenyaya yakaburitswa mupepanhau El Espectador, Nhau yeanokanda inounganidza uchapupu hwaAlejandro Velasco Sánchez, iye oga akapona pakaputsika ngarava yeARC Caldas, iyo yakagadziridzwa kwakasiyana siyana kwemwedzi misere muAlabama uye, sekureva kweguhwa, yaive ichiendesa zvinhu zvisiri pamutemo kuenda kuColombia. Bhuku raGabriel García Márquez raanofarira Yaionekwa se "nhoroondo yake yakakwana" nepepanhau El País.
Yakanyorwa pakati paJune 12, 1942 naAugust 1, 1944, zuva raaizowanikwa pamwe chete nevamwe vese vemhuri yake nemauto eNazi, dhayari raAnn Frank ndiyo humbowo hunoshungurudza hwechakange chiri chiitiko chakadeura ropa kwazvo munhoroondo XNUMXth century. Yakanyorwa mudenga remba yekuvanda kwaaigara nemhuri yake, Anne Frank, musikana wechiJuda ane makore gumi nematatu, Akanyora nzira yake yekuona nyika uye nekunyepedzera kunyepedzera kwaari achiri mabhuku akanakisa asiri emanyepo.
Kufungisisa, naMarco Aurelio
Yakanyorwa muchiGiriki pakati pa AD 170 na180, nguva pfupi mushure mekufa kwamambo, Kufungisisa kwaMarcus Aurelius kunomutsa monologue yemukati yemadzibaba uyo meseji yake ine simba yakabvumidza zvidzidzo izvi kupfuura munguva. Kuburikidza nemavhoriyamu gumi nemaviri, iyo Meditations inoongorora Kushungurudzika kwaMarco Aurelio uye chiratidzo chake chenyika, imwe apo basa rake restoic rekutonga vanhu risingakwanise kusvika kuna Mwari kana kumisa hupenzi hwevanhu. Rimwe remabhuku anozivisa zvakanyanya munhoroondo.
Mufananidzo we Africa, naChinua Achebe
Mufananidzo weAfrica: Rusaruro muConrad's Mwoyo weRima rinosanganisa imwe ye hurukuro dzakapihwa nemunyori weNigerian Chinua Achebe paUniversity yeMassachusetts muna 1975. Pakati payo, munyori we Zvese zvinowira pasi inorwisa chiono che Africa kuburikidza neruzivo Mu moyo werima naJoseph Conrad, uyo, sekureva kwaAchebe, anomiririra zvisirizvo zvisizvo zvekondinendi inoonekwa semubatsiri kuEurope. Yakatsaurwa seimwe yeakanyanya kunaka postcolianism kuongorora, Mufananidzo we Africa unowana mukurumbira mukuru panguva iyo kondinendi yechitema inomutsa, kupfuura nakare kose, izwi rayo kuburikidza nemavara.
Saka Spoke Zarathustra, naFriedrich Nietzsche
Yakanzi "Bhuku revose uye pasina munhu", Saka Spoke Zarathustra ibasa rakakura remufilosofi Nietzsche uye rakaburitswa muna 1885. Mumativi ese mana ayo basa rakakamurwa, munyori anoshandisa munhu anonzi Zarathustra senzira kuunza mazano avo, vachinyanya kukoshesa kugamuchirwa kwehupenyu sekuziva kwedu uye kuramba kweupenyu hwapashure uye dzidziso dzechitendero izvo zvinonetesa munhu. Basa iri rakafungidzirwa naiye Nietzsche senge "chipo chakakura kukunda hunhu hwakatambirwa".
Unyanzvi hweHondo, naSun Tzu
Yakanyorwa imwe nguva mukupera kwezana ramakore rechina BC pamubati wemishenjere, Iyo Art yeHondo rave bhuku risingagumi nekuda kwemazano mazhinji akapayona neChinese nyanzvi yezvemauto Sun Tzu anopfuura makore 2.400 XNUMX apfuura. Yakakamurwa mukati Zvitsauko gumi neshanu se "zvidzidzo", hunhu hwebhuku, hunosanganisira hunyanzvi hwekukunda muvengi wako, kugadzirira kurwa uye kuzadzisa zvimwe zvinangwa, rakapfuura nenzira yekuti muzana ramakore reXXI rave mumwe wevabatsiri vakuru muzvirongwa zvehutungamiriri uye bhizinesi manejimendi.
Tsamba kune mudiki munyori wenhau, naMario Vargas Llosa
Rakadhindwa muna 2011, chinyorwa chakanakisa che Mario Vargas Llosa inorondedzera, mune epistolary mode, iyo pfungwa yepasirese yemunyori wePeruvia-Spanish nezve kugadzira zvinyorwa. Kubudikidza nemapeji aro kugadzirwa kwemunyori kwakadaro kwakasiyiwa, chimiro chinozvimukira choga zvichienderana nepfungwa yemunyori, kugadzirisa mavambo enhau dzese dzakazvarwa nemanzwiro, mufananidzo kana nuance inobvumidza shanduko kufemerwa novel inokwanisa kunyengedza munhu wese. Tine chokwadi chekuti vanyori vadiki (kana kwete) vanyori vanoramba vachitenda munyori wePataleón nevashanyi nekugadzira bhuku iri.
De Profundis, naOscar Wilde
Akazvarwa Nokurwadziwa, De Profundis itsamba yakanyorwa naWilde mukati memakore ake maviri ekumanikidzwa mushure mekuve nemhosva sodomy nekuchengetedza hukama naIshe Alfred Douglas, mwanakomana waMarquis weQueensberry. Kuverenga raive jeri rechitatu umo mumwe wevanyanyisa uye pamberi pevanyori vake venguva akasarudzika, kunyanya panguva yerubvu rwezana regumi nemapfumbamwe apo nguva yeVictorian yakanga isingatenderi mamwe maitiro "anosemesa".
Ndeapi akanakisa asiri emanyepo mabhuku awakambo verengera iwe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Bvunzo » Mabhuku akanakisa asiri echokwadi
Iwe wakanganwa "MuCold Ropa" naTruman Capote uye "Operation Massacre" Rodolfo Walsh.
Ivanhoe naWalter Scott. Nhoroondo yekudzidza yenoverengeka
5 mazita madema emwedzi wechishanu. Chikomo, Manzini, Mola, Silva naSwanson